Fa maninona ny zebra no misy dian-kapoka?
Ireo biby manokana ireo dia manaitra ny ankizy sy ny olon-dehibe amin'ny tanjany ary koa tandindonin-doza raha manorisory azy ireo tsy amin'antony ianao. Ny tsindry eo amin'ny sary dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny maodely fandokoana:
Zebra pejy fandokoana
Zebras pejy fandokoana
Na eo aza izany dia manao fikarohana bebe kokoa aho ary hitako fa efa an-taonany maro no niadian-kevitra ny fanontaniana hoe maninona no misy tadiny ny zébras. Ka tsy irery aho amin'ny tsy fahalalako.
Tsotra kokoa angamba ny vahaolana, raha mbola tsy voamarina XNUMX isan-jato. Ny antony mahatonga ny zébras dia misy kapoka satria izy ireo dia voaaro tsara amin'ny fanafihan'ny lalitra tsetse. Satria afaka mamindra aretina mampidi-doza izy ireo. Ny mason-tsivana amin'ny fanidinana tsetse dia tsy ahafahany mahita zébras.
Ausmalbilder Kamele - Wilde Tiere